Qoor Qoor “Farmaajo waan u sheegnay in uusan imaan Dh/Mareeb isaga oon wadin RW Habargedir ah” - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Qoor Qoor “Farmaajo waan u sheegnay in uusan imaan Dh/Mareeb isaga oon...
Qoor-Qoor oo galabta inta uusan ka dhoofin magaalada Muqadisho Kulumo kala duwan la aaaday qaybo kala duwan oo isugu jira hogaanka beesha Habargedir ayaa u sheegay in Farmaajo ay beesha Habargedir ka sugayso in uu ka dhabeeyo balantii uu ka qaaday beesha.
“.. koleey waan u sheegnay in uusan isku soo ceebaynin Dhuusamareeb isaga oo wadin Ra’iisal Wasaare Habargedir ah, hadii uu yimaadana Karaama kalama soo noqon doono Galmudug”, sidaas waxa yiri Madaxweyne Qoor Qoor.
Sida MOL loo xaqiijiyay, hogaanka beesha Habargedir ayaa kula talisay Qoor Qoor in uu u dhaarto Farmaajo, cabsina galiyo, maadama Farmaajo yahay shaqsi aan xamili karin goodinta iyo hanjabaada.
Qoor Qoor ayaan si aan gabasho lahaynin ugu hanjabay MW Farmaajo, waxaana muuqato in beesha Habargedir ay ka go’aan tahay in ay hesho kurigaas.
Beelaha kala duwan ee ku dhaqan deegaanka hoos yimaada Galmudug ayaa aad uga xumaaday in Qoor Qoor oo ka dhigo Galmudug DG ay leedahay beesha Habargedir oo kali ah.
Previous articleMareykanka oo ka hor yimid muddo kororsiga Dowladda Farmaajo
Next articleMaamulka G/Banaadir oo kahadlay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho